အရွယ်ရောက်လာမယ့်သားသားမီးမီးတို့အတွက် နိုင်ငံရပ်ခြားအကြောင်းသိကောင်းစရာ (ထိုင်းနိုင်ငံ) - Chit MayMay
Home Child Entertainment အရွယ်ရောက်လာမယ့်သားသားမီးမီးတို့အတွက် နိုင်ငံရပ်ခြားအကြောင်းသိကောင်းစရာ (ထိုင်းနိုင်ငံ)
အရွယ်ရောက်လာမယ့်သားသားမီးမီးတို့အတွက် နိုင်ငံရပ်ခြားအကြောင်းသိကောင်းစရာ (ထိုင်းနိုင်ငံ)
ထိုင်းနိုင်ငံဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အဓိကအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံလို့ဆိုနိုင်ပြီး သူတို့ရဲ့ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု၊ ဘာသာတရားတို့က မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ အနီးစပ်ဆုံး တူညီတယ်လို့တောင်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ရာဇဝင်ထဲမှာ မဟာပြိုင်ဘက်တွေဖြစ်ခဲ့ကြပေမယ့် လက်ရှိအချိန်မှာ ခေတ်မှီတိုးတက်မှုအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ ထိုင်းနိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံထက် ပိုမိုသာလွန်နေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပြီး နှစ်စဥ်မြန်မာနိုင်ငံကနေ ထိုင်းနိုင်ငံကို အလည်အပတ်သွားရောက်တဲ့သူတွေ၊ စျေးဝယ်ထွက်တဲ့သူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ဒီနေ့မှာတော့ အရွယ်တစ်ခုရောက်ထားပြီးတဲ့ ဖေဖေမေမေတို့ကနေပြီး သားသားမီးမီးတို့ဆီ ဗဟုသုတဖြစ်ဖွယ်မျှဝေနိုင်အောင်လို့ ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံအကြောင်းအရာလေးတွေကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ တရားဝင်နာမည်ကတော့ The Kingdom of Thailand ဖြစ်ပြီး အရင်က Siam လို့ လူသိများပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံဟာ နယ်မြေအနေအထားအရ မြန်မာ၊ လာအို၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ မလေးရှားတို့နဲ့ နယ်နမိတ်ချင်းထိစပ်လျက်ရှိနေတဲ့ နိုင်ငံပါ။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ လူဦးရေ (၆၉) သန်းကျော် နေထိုင်လျက်ရှိပြီး ဘန်ကောက်မြို့ကတော့ နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်လည်းဖြစ်၊ အကြီးမားဆုံးမြို့တော်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်းပေါင်း (၁၄၃၀) ကျော်ရှိတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အမြင့်မားဆုံးတောင်က Doi Inthanon တောင်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံရဲ့အဓိကကိုးကွယ်ရာဘာသာကတော့ မြန်မာနိုင်ငံနည်းတူ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပါတယ်။
တိုင်းပြည်အတွင်း မှီတင်းနေထိုင်ကြတဲ့ လူဦးရေရဲ့ (၉၅) ရာခိုင်နှုန်းက ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်ကြပြီး နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းမှာလည်း ဗုဒ္ဓရုပ်တု အများအပြား တည်ထားကိုးကွယ်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ သားသားမီးမီးတို့ရဲ့ အချစ်တော်ဖြစ်နိုင်တဲ့ Siamese ကြောင်လေးတွေကို ထိုင်းနိုင်ငံက အဓိကမွေးထုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပြီး ကြံ့အမျိုးအစား (၂) မျိုးအပါအဝင် တိရိစ္ဆာန်မျိုးစိတ်ပေါင်း (၁၅) မျိုးကို မျိုးမသုဥ်းသွားအောင် တရားဥပဒေနဲ့တကွကာကွယ်ပေးထားပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ လာဘ်ကောင်ရုပ်လို့ခေါ်ရမယ့် အမှတ်သင်္ကေတကတော့ ဆင်ဖြစ်ပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ ရာစုနှစ်များက နိုင်ငံတွင်းဆင်ကောင်ရေပေါင်း (၁၀၀,၀၀၀) အထိရှိခဲ့ရာမှ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ (၂,၀၀၀) ခန့်သာ ကျန်ရှိတော့တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ အစားအသောက်တွေကတော့ အာဆီယံဒေသတွင်းမှာတင်မကဘဲ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေကိုပါ အကောင်းဆုံးဆွဲဆောင်နိုင်ပြီး လမ်းဘေးဆိုင်တန်းက အစားအသောက်တွေဖြစ်သည့်တိုင် သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်မှု၊ အရသာကောင်းမွန်မှုတို့နဲ့ နာမည်ကြီးနေတဲ့ အစားအစာတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ့လက်ဝှေ့အားကစားနည်းနဲ့ပုံစံတူ မွေထိုင်းအားကစားနည်းက ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ အမျိုးသားအားကစားနည်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အခုဖေဖေမေမေတို့အတွက် ပြောပြပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့ သိထားသင့်တဲ့ အခြေခံဗဟုသုတတွေဖြစ်ပြီး ဖေဖေမေမေတို့အနေနဲ့ သားသားမီးမီးတို့ ငယ်ရွယ်စဥ်တည်းက နိုင်ငံရပ်ခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဗဟုသုတတွေရအောင် ပြောပြပေးထားသင့်တယ်လို့ အကြံပေးလိုက်ရပါတယ်။
Chit May May မှရေးသားဖော်ပြနေတဲ့ ဆောင်းပါးတွေကို အခြားသော Media ၊ Website များနဲ့ Facebook Page များမှာ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြခြင်း မပြုပါရန် လေးစားစွာ အသိပေးအပ်ပါသည်။
Previous articleဆယ်ကျော်သက်သားသမီးတွေနဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်ဖို့ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ အချက်အလက်များ
Next articleကလေးလေးတွေကို အိပ်ရာဝင်ပုံပြင်လေးတွေ ပြောပြခြင်းကြောင့်ရရှိလာတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများ
လမ်းလျှောက်တတ်စကလေးတွေကို မျှဝေခြင်းအကြောင်း ဘာကြောင့်သင်မပေးသင့်တာလဲ
၁၁လအရွယ် ကလေးငယ်တွေကို ဘယ်အစားအစာတွေ ကျွေးလို့ရပြီလဲ?
ဦးနှောက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာရှိပြီး စာသင်ယူရတာ အခက်တွေ့နေတဲ့ ကလေးငယ်တွေဆိုတာ..?
Mom and Baby158
Nyein Thu - August 24, 2020 0